မြနန္ဒာစားသောက်ဆိုင်သို့ တစ်ခေါက်… | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
September 30, 2008, 2:12 am Filed under: Food လွန်ခဲ့သောတစ်ရက်က မရောက်တာ တော်တော်လေးကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ Peninsula Plaza ဘက်ကို ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ခြေဦးလှည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လုပ်စရာရှိတာလေးတွေပြီးချိန်မှာ တခုခုစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ များသောအားဖြင့် မြေအောက်ထပ်က အင်းလေးဆိုင်မှာပဲ စားဖြစ်ပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်တော့ တခြားဆိုင်မှာစားဖို့ စိတ်ကူးရလိုက်တယ်။ အင်းလေးဆိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အရင်က ကျွန်မကြိုက်သော Burger King ဆိုင်ရှိပေမယ့် ထိုဆိုင်ပိတ်သွားတာကိုတော့ ယခင်တစ်ခေါက်က ကျွန်မသိလိုက်ရတယ်။ ယခုအခေါက်မှာတော့ Burger King ဆိုင်နေရာမှာ မြနန္ဒာ မြန်မာစားသောက်ဆိုင်က နေရာယူထားတာကို ကျွန်မတွေ့လိုက်ရတာနဲ့ စူးစမ်းချင်စိတ်အနည်းငယ်ဖြင့် ထမင်းသွားစားခဲ့ပါတယ်။
အမိမြေနှင့်ဝေးနေချိန်မှာ အလွမ်းဆုံးသောအရာတွေထဲ တစ်ချိန်က မတွေးခဲ့ဖူးတဲ့ စားနေကျ အစားအသောက်တွေကို တော်တော်သတိရနေမိပါတယ် .. ။ Like this:Like Loading...
Comment by mm thinker
September 30, 2008 @ 4:13 am Reply	havingaBurmese foods in far away is priceless….
Comment by phoneix
September 30, 2008 @ 7:35 am Reply	မြန်မာစားသောက်ဆိုင်တွေရဲ. ထုံးစံကတော့ ဆီများတာပဲ။ ထမင်းကုန်ခါနီးရင် ပိုပြီးသိသာပါတယ်။ အောက်မှာ ဆီတွေတပုံကြီးနဲ့စားရတာ အီလာရော။ အဟဲ ရောက်တုန်ုးစားရတာဆိုတော့လည်း ချေးမများနိုင်ဘူးဗျ။ လာသမျှ ခေါင်းမဖော်တန်းပဲ ဆိုပါတော့။
September 30, 2008 @ 9:44 am Reply	ယူကေမှာတော့ ထမင်းက ကျောက်ခဲလိုဘဲ ကျက်လဲ မကျက်ဘူး။ စားသောက်ဆိုင်သွားရင်တော့ ၅၀-၆၀ ပေါင် အနည်းဆုံးပေးရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ချက်ဘဲ စားရတယ်။ လွမ်းလိုက်တာ ရဲရင့်က လဘက်ရည်
Comment by ဆောင်း
September 30, 2008 @ 12:45 pm Reply	ကျနော်လဲ ရောက်တယ်.. နေရာလေးကတော့ ကောင်းပါ့.. အစားအစာကတော့ သိပ်မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်.. ဘလော့စ်မေတ္တာ ခံယူထားပါတယ်.. လာဆူရန် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..
Comment by တောင်ပေါ်သား
September 30, 2008 @ 3:03 pm Reply	လင်းလက်ဆီ အရင်ထဲက ရောက်ပါတယ်—-စီပုံးမှာလည်းခြေရာချန်ဘူးပါတယ်—စားသောက်ဆိုင်လေးအကြောင်းဖတ်ရတော့လည်းအမိမြေကို လွမ်းတယ်—အစားအသောက်လေးတွေ ပြထားတာလည်းစားချင်စရာပါ—စင်္ကာပူကိုသွားလည်ဖို့ စဉ်းစားနေတာကြာပြီ—စင်္ကာပူမှာ ချစ်မိတ်ဆွေတွေ များတော့ လည်ဖြစ်အောင်သွားလည်မယ်—-ခင်မင်လျက်မသက်ဇင်
Comment by မသက်ဇင်
September 30, 2008 @ 5:24 pm Reply	ဟုတ်တယ် တချို့ ဆိုင်တွေကစေတနာမပါဘူး ဒါနဲ့ တချို့ ဘလောက်တွေလိုမျိုး ပထမဆုံးလေးများ တင်စေချင်တယ် …
ကျွန်တော် topic တချိူ့ ပေးမယ်လေ။-ပထမဆုံးတက်ရသည့်ကျောင်း-ပထမဆုံးတက်ရသည့်အတန်း-ပထမဆုံးအတန်းပိုင်ဆရာမ-ပထမဆုံးသောသူငယ်ချင်း(မိန်းကလေး)-ပထမဆုံးသောသူငယ်ချင်း(ယောင်္ကျားလေး)-ပထမဆုံး ဖတ်ရသော စာအုပ်-ပထမဆုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖတ်မိသည့် ကျောင်းစာ-ပထမဆုံး ရဖူးသောဆု-ပထမဆုံး ဝယ်သော သီချင်းခွေ -ပထမဆုံး အကြိမ် ဝယ်သော နိုင်ငံခြား တီးဝိုင်း ဗီဒီယို အခွေ-ပထမဆုံး ရုံမှာ ကြည့်ခဲ့ဖူးသော ရုပ်ရှင်-ပထမဆုံး ရည်းစားထားခဲ့ဖူးသောနှစ်-ပထမဆုံး ရေးခဲ့သော ရည်းစားစာ-ပထမဆုံး ကဗျာ-ပထမဆုံးရောက်ခဲ့သော အခြားမြို့-ပထမဆုံးရောက်ခဲ့သော နိုင်ငံရပ်ခြား-ပထမဆုံး သောက်ဖူးသော ဆေးလိပ်၊အရက်-ပထမဆုံး ချက်ဖူးသော ဟင်း-ပထမဆုံး ပစ်ဖူးသော သေနတ်-ပထမဆုံး ဘလော့ပို့စ်-ပထမဆုံး ကျောင်းပြေးပြီး သွားခဲ့သည့် နေရာ-ပထမဆုံး လည်ပတ်ကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသော ဘလော့ဂ်-ပထမဆုံး စတင်ရင်းနှီးခဲ့ရသော ဘလော့ဂ်ဂါစသဖြင့်ပေါ့နော်။
October 1, 2008 @ 9:00 am Reply	ညီမရေဗမာဆိုင်တွေ ပေါများလာတာ ၀မ်းသာစရာပဲနော်။ Pennisula Plaza တခုလုံးကို ဗမာတွေ သိမ်းလိုက်ပြီ ထင်ပါရဲ့။ အမတို့ရှိတုန်းကတော့ ဗမာဆိုင် ၃-၄ ဆိုင်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အားကျလိုက်တာ။
October 1, 2008 @ 4:28 pm Reply	လင်းလက်တို့က စားမကောင်းဘူးလို့ ဆိုသည့်တိုင် သွားစရာ ဆိုင်လေးတော့ ရှိသေးတာပဲနော်၊ ကျနော့်ဆီ မှာတော့ တရုတ်နဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်တောင် ခပ်ရှား ရှားရယ်…၊ မြန်မာဆိုင်ဆိုတာတော့ ဝေလာဝေး….၊
ဒီတော့လည်း ဘဲဥလောက်ပဲ ပြုတ်တတ်တဲ့ အရည်အချင်းလောက်ကနေ ဝက်သားနီချက်နဲ့ မြင်းခွာ ရွက်သုပ်လိုမျိုး လုပ်တတ်လာတဲ့ အထိ trial and error သွား ရတော့တာပဲဗျာ…😀
Comment by Nyi Linn Thit
October 1, 2008 @ 7:39 pm Reply	ဒါတွေမြင်ရတော့ မြန်မာအစားအသောက်ကိုလွမ်းမိပါရဲ့
October 2, 2008 @ 5:34 am Reply	မမရေ…အလည်ရောက်လာရင်းမြနန္ဒာမှာထမင်းဝင်စားသွားတယ်…မဆိုးပါဘူးကောင်းသားပဲဒါပေမဲ့ကျနော်ကတော့ဧရာဝတီကိုပိုကြိုက်တယ်…အိမ်ကဟင်းချက်တာနဲ့တူသလားလို့ပါ…ဟဲဟဲအဆင်ပြေပါစေဗျ
October 2, 2008 @ 7:12 am Reply	Sis linlet…အဲဒီဆိုင်မှာ လာစားသွားသေးတယ်…စားလို့ ကောင်းပါတယ်…
October 11, 2008 @ 2:44 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI